Indlela ukukhetha tan ezinhle?
Esihle tan - yithuluzi elihle ukuthi uyakwazi ngokushesha ukunikeza isikhumba sakho umthunzi nice. Kulokhu, awudingi ukuba uchithe isikhathi kuyiwe beauty salon, solarium kanye nasezindaweni zokubhukuda. ukhilimu Special kuyoyixazulula inkinga yakho ngokushesha futhi ephephile.
Indlela ukukhetha okuhle ukhilimu-tan?
Abaningi bakholelwa ukuthi onjalo izimali musa ihluke bodwa. Empeleni, ngisho bheka efanayo. Futhi umphumela uthembisa sinye siyafanana. Kodwa kulokhu has nezimfanelo ezingavamile zomunye lalo.
Ngokwesibonelo, kukhona umehluko omkhulu phakathi umphumela yilanga elangeni kanye okhilimu, ukushuka. Izindlela sokuqala kubonakala kakhulu kamuva, ngoba Iqukethe colorant kancane. Plus elangeni ukuthi kwisicelo kulula ukulawula umbala umfutho futhi kungaba lula ngaso sonke isikhathi ukulungisa semfene, uma kunesidingo. Kodwa uma udinga tan ngokushesha, le ndlela ngeke ilingane. Plus lezi zimali ukuthi ngokuvamile futhi ziye asenze, okunomsoco firming umphumela. Ukushuka isidingo izakhiwo ezinjalo. Phakathi amaphutha kungenziwa kuqashelwe ukuthi le elangeni futhi uhambe isikhathi eside, futhi ngokuvamile basuke wageza off Ukuboshelwa. Futhi ngokuvamile intengo oluthinta ngqo izinga ukushuka zakho zesikhathi esizayo.
Esihle tan: Izici
Umthelela ukushuka kubonisa ngokushesha, kodwa inqubo kudinga ikhono lokusebenza.
Kukhona zombili izindlela ezivamile futhi avtobronzatory. Okokuqala ukunikeza umphumela wangaleso sikhathi (kufika ku kusihlwa). Isigaba sesibili ishiywa esikhumbeni izinsuku ezimbalwa. ejenti okunjalo isinyathelo ukusabela zamakhemikhali. Balondekile. Ngokuvamile eze ngesimo mousses futhi izifutho.
A tan ezinhle: isicelo
Ngolunye usuku ngaphambi isicelo udinga ukwenza amalungiselelo. Ukuze tan kwaba smooth xaxa, iphathwa isikhumba khuhla futhi enze epilation. Ngaphambi kokufaka isicelo bronzers ungayisebenzisi amakha - ngenxa yokusabela chemical kungaholela ukucasuka. Ngaphambi inqubo, ushawa. Kusho ngokweqa kudingeka bonyana asetjenziswe ukuze ome isikhumba.
Sabalalisa amashiya futhi hairline ukhilimu amafutha kulezi zindawo kungukuthi namabala. Uma loku kungentiwa, amabala orange avele ngenakugwemeka. Ungase futhi kancane gcoba amadolo izindololwane. Iinhlokwezi zihlukaniseke ngesineke okukhulu kakhulu.
Qinisekisa ukuthi usebenzisa amagilavu ngoba umbala isanqante nzima ukuboniswa nezintende zezandla. Kodwa ukube bekungasekho amagilavu, ukugcina peroxide, utshwala noma izidakamizwa "Chlorhexidine".
Mousse bese fafaza efiselekayo ukusebenzisa phezulu. Ikakhulukazi yesibili - ku esiswini, entanyeni nasesifubeni izindlela okufanele zisetshenziswe ngokunyakaza isiyingi. Izandla embozwe esihlakaleni nehlombe, kuqala ngaphakathi, bese ngaphandle. Ngokuvamile, izimonyo umzimba ayifanele umuntu ngakho kungcono abe ithuluzi ehlukene.
Yiqiniso, ngaphambi kokuthenga ukuze uqonde kangcono ukuthi ukubuyekezwa. Ngakho unciphise amathuba amaphutha isicelo futhi Ukukhetha. Ngokuvamile tan ezinhle has a lot of okubuyayo, futhi omubi walandisa ekuchazeni kabi izimali noma izici ngazinye abesifazane silisebenzise.
Hand Cream "Nitrodzhina": ukubuyekezwa, okuqanjiwe. izimonyo Ukunakekela "Nitrodzhina"
Nobuhle izindaba: Afrika insipho emnyama nensipho Agafia
Kuyini powder amaminerali
SS-ayisikhilimu ( "Meri Khiye"): ukubuyekezwa, izincazelo, ingxenye
Concealer kanye highlighter: uyini umehluko, umehluko oyinhloko kanye izici kwesicelo
Izimonyo "Floresan": umthengi Izibuyekezo
Nefilosofi ezibucayi of Kant
UPhumelele: Inani igama. Imvelo PHETHO womnikazi wayo
Okukhethekile odokotela: isici
Dolma East e multivarka: zokupheka elula
Miranda Shelia: isithombe, ukuphakama, isisindo
Usayizi esimaphakathi (S): nemingcele yayo
Kungani bapheqela: a iphedi kukhompuyutha ephathekayo?
Okuphoqelekile yokugoma schedule izingane kuze iminyaka 3
Peach Sweet kanye namanzi: izakhiwo ewusizo kanye contraindications